Iyo yakasarudzika gedhi IP 192.168.0.1 is iyo inoiswa nema routers pamwe nema modems senge D-Link router se IP default kero kuti upinde kune admin admin. Kugadzirisa epamberi uye yakakosha 192.168.0.1 marongero anogona kushandiswa.
192.168.0.1 Admin Kupinda
Matanho Ekupinda kune IP 192.168.0.1
Kana iyo IP Kero yakasarudzika yeModem / Internet Router iri 192.168.0.1 mune iyo mamiriro, iwe unogona pasina mubvunzo kuishandisa kupinda mukati meiyo yekugadzirisa console zvakare yako Modem / Router inodzora iyo Internet Zvirongwa. Simply kupinda mukati 192.168.0.1, tevera pazasi mirairo
Ita shuwa kuti chishandiso chakanamirwa kune system kungave pamusoro peEthernet Wire kana pasina waya.
Zvino vhura webhu bhurawuza raunoshandisa kuwana iyo Internet.
Mubharani yekero, mhando http://192.168.0.1 or 192.168.0.1.
Peji rekupinda re router yako pamwe ne modem inozoonekwa pachiratidziri.
Tumira zvakasarudzika zvekupinda maIds senge zita rekushandisa mukuwedzera kune password yekumisikidza peji re router yako.
Iyo miniti iwe yaunotumira zvinyorwa zvekutumira, iwe unozopinda mukati kune iyo yekumisikidza peji rewebhu mukuwedzera uchaziva maitiro ekuita iyo inodiwa inoshandurwa.
Uve usingakwanise kuchengetedza mushumo pane iyo rekupinda ruzivo pamusoro peakakosha mazwi?
Kuongorora kabhuku kaRayidzo
Kana iwe watadza kuyeuka zvitupa zvekupinda zveiyo 192.168.0.1 mumashure unofanirwa kuongorora Chinyorwa kana paBhokisi reiyo router. Uye zvakare, iwe unofanirwa kutarisa iyo yakasarudzika router runyorwa rwemazita emushandisi pamwe nekiyi kiyi yeiraira.
Dzosera iyo Router
Kana iwe wakachinjisa iyo yekumira yekupinda marondedzero eiyo router uye ukaregeredza iwo panguva iyoyo nzira yepamusoro ndeyekudzoka kunotora ndiyo iyo router reset neasipo marongero ayo anonyatsodzosera zvese zvigadziriswazve zvakare kune zvisizvo. Zve router reset:
Tora bata chinhu chakanongedzwa senge wemazino kana Pini uye edza kutsvaga iyo yekumisazve switch pane ma routers kumashure.
Iyo iyo nguva yawakawona diki yakavanzika switch. Dhinda & bata switch yemasekondi gumi neshanu nechimwe chinhu chakanongedzwa.
Izvi zvinodzosera zvese zvigadziriswazve kudzosera kumagadzirirwo asipo pamwe chete nemazita evashandisi / mapassword awakashandura. Saka ikozvino iwe unenge uchikwanisa kupinda nematanho ekumira ekumira.
Iyo yega IPs yakazara ine angangoita mamirioni 17.9 kero akasiyana, ese akaisirwa parutivi kuti ashandiswe pane zvakavanzika network. Naizvozvo, yakavanzika IP ye router haidi kuti ive yakasarudzika.
Kune ese madhizaini ari mumambure router inogovera yakachengetedzwa IP kero, ingave iri bhizinesi-chikamu chegadziriro kana diki imba network. Zvese zvishandiso mune ino system zvinogona kubatana kune imwe gadget mune ino system neiyi IP yega.
Nekudaro, iyo yakavanzika IP kero haigone kuwana iyo net. Yega IP kero dzinofanirwa kuve dzakabatana neInternet Service Provider, semuenzaniso, Comcast, Spectrum kana AT&T. Saka ikozvino, zvishandiso zvese zvakabatanidzwa neinternet kwete zvakananga, kutanga zvichisanganisa nesystem, iyo yakasungirirwa kune internet, gare gare ichibatanidza kune yakakura internet.